Niezaka nanara-maso izany ny fokonolona sy ireo tompom-pasana ka voasambotr’izy ireo tao Amparemahitsy ny Alakamisy 19 desambra teo ny telo tamin’izy ireo. Lehilahy ny iray , izay voatondro ho nangalatra raha vehivavy kosa ny ny roa ambiny izay voatondro fa mpividy halatra. Omaly folakandro moa izy telo mianadahy ireto no nentina nohenoina teny anivon’ny fampanoavana taorian’ny nandraisan’ny zandary ny raharaha. Tsiahivina fa ankoatra ny lakroam-pasana dia betsaka ireo kojakoja vita amin’ny vy misy mangalatra amin’izao toy ny arofanina amin’ny tetezana…. noho ny halafosan’ny vy.